Ọdachi ọdachi kachasị njọ n'akụkọ ihe mere eme | Netwọk Mgbasa Ozi
Foto nke Hurricane Katrina, edere na 2005
Oge ụfọdụ ọdịdị na-egosi anyị ike ya niile, ike ya niile. Ọ bụ ihe bụ akụkụ nke ụwa a, ya mere, Anyị enweghị nhọrọ ọzọ ma ọlị ka anyị mụta ibi na ya.
Agbanyeghị, kemgbe ọtụtụ narị, e nweela ihe ịtụnanya na - emeghị nke tụrụ anyị n’anya, kamakwa na-etinye nde mmadụ n ’ihe ize ndụ. Taa, anyị ga-echeta ọdachi ndị na-agbawa obi na-emebi ihe na akụkọ ntolite.
Ala ọma jijiji na mbufịt na Lisbon (Portugal)
Anyị na-echekarị, ọ bụghị n'enweghị ihe kpatara ya, na Ala Iberian Peninsula enweghị ihe egwu nke ala ọma jijiji ma ọ bụ ihe omume ihu igwe dị egwu. Ma na November 1, 1755 e nwere ala ọma jijiji nke butere ebili mmiri, na-akpata ọnwụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100 puku mmadụ.
Ajọ Ifufe Gilberto na Mexico
Oké ifufe, nke a hụrụ site na satellites ma ọ bụ rada, dị mma, ma eziokwu bụ na ị kwesịrị ịkwanyere ha ùgwù ma were usoro iji zere ihe egwu. Mana ọbụlagodi mgbe ị kpachara anya, ihe ndabara na-eme, dịka na Septemba 1988. Ọ kpatara ngụkọta nke 318 nwụrụ.
Ala Ọma Jijiji na tsunamis na Valdivia (Chile)
Ka ọnwa nke iri abụọ na abụọ dị na mkpụrụ ụbọchị iri na abụọ n’afọ 22, na obodo Valdivia dị na Chile, ala ọma jijiji nke 1960 Celsius debara aha, nke kpatara ọtụtụ ebili mmiri. Banyere 2 puku mmadụ Ha tufuru ndụ ha.
Haiti mgbe mbufịt tsunami nke 2010
Ajọ Ifufe Katrina na USA
Ọ bụ otu ajọ ifufe na-ebibi ihe na akụkọ ntolite ugbu a. O si South Florida ruo Texas, na-ahapụ ọtụtụ ihe onwunwe funahụrụ ya. Were ndụ si 2 puku mmadụ, na-akpata ọnụọgụ kacha elu na New Orleans.
Ogbunigwe Krakatoa, na ebili mmiri sochiri na Indonesia
Mgbawa ugwu na-emepụta ọhụụ dị egwu, mana ha nwekwara ike ịhapụ ndị metụtara, dịka o mere na August 26, 1883 na Indonesia. Krakatoa gbawara n’ụdị ihe mgbawa ahụ, na a nụrụ ya karịa kilomita 3. Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, mgbe ntiwapụ ahụ malitere usoro ebili mmiri nke ruru elu nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 40. Ha tufuru ndụ ha ihe karịrị puku mmadụ iri.
Dị ka anyị pụrụ ịhụ, ọdachi ndị na-emere onwe ha ndị na-emebi ihe na-abịa n’oge, ma ị ga-amụrụ anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ọdachi ndị kasị bibie ụwa